गुल्मीमा झाक्रीले तातो पन्यूँ प्रहार गर्दा एक बिरामीको मृत्यु, २ जना घाइते - Jyotinews
गुल्मीमा झाक्रीले तातो पन्यूँ प्रहार गर्दा एक बिरामीको मृत्यु, २ जना घाइते
हुमाकान्त पोखरेल २०७७ पुष २९ गते १९:०८
गुल्मी । झारफुकको क्रममा झाँक्रीले हानेको पन्युको चोटले एकजनाको मृत्यु भएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिका – १ का ३८ बर्षिया राम प्रसाद श्रेष्ठले तातो पन्युले हान्दा जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका ३ दर्लामचौरका ६३ बर्षिया राम बहादुर मुखियाको ज्यान गएको प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रविणलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
ढाड दुखेको निको पार्न भन्दै राम बहादुर झारफुक गर्न दुई छोराहरुको साथमा तम्घास स्थित धामिकै घरमा आउनुभएको थियो । चारदिनसम्म पनि रामबहादुरलाई खान नदिई तातो फलामे डन्डी, स्टिलको झाँझर तताएर तथा प्लास्टिक पाइपले हानेको मृतकका छोरा हुम बहादुरले बताउनुभयो ।
बुधबारबाट मुखिया अचेत भएपछि धामि स्वयम् श्रेष्ठले आफ्नो घरमा केही अपरिचित व्यक्ति आई हल्ला मच्चाएको भनि प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको थियो । उहाँको उजुरीपछि प्रहरी निरिक्षक सन्तोष चन्दको नेतृत्वमा उनकै घर पुगेको प्रहरीको समुहले धामिले हानेर मुखियाको मृत्यु भएको रहस्य पत्ता लगाएको हो । मृतक रामबहादुरको शरीरका सबैजसो भागमा निलडाम रहेको छ ।
आफुलाई धामि दावी गर्ने श्रेष्ठले रेसुङ्गा नगरपालिका ५ भुवनपानीकी ४० बर्षिय टोपला दमाईलाई पनि गएको २४ पुसमा आफ्नै घरमा बोलाई तातो पन्युले हानेर घाइते बनाएका छन् । अहिले घाइतेको जिल्ला अस्पताल गुल्मीमा उपचार भइरहेको छ भने शवको पोष्ट मार्टमको लागि अस्पतालमा राखिएको छ ।
घञटनामा संलग्न ३८ बर्षिया रामप्रसाद र उनकी श्रीमती ३६ बर्षिय शान्तिला श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
शान्ति समाजमा नयाँ नेतृत्व, सभापतिमा खनाल निर्विरोध
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघमा कांग्रेस र ओली पक्षीय सञ्चारकर्मीको गठबन्धन
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि एक हप्ता दिउँसो बन्द गरिने
काठमाडौं मेयर कप: एपीएफ र पुलिस खेल्दै
अमेरिकाले ६ सेप्टेम्बरसम्म बेरोजगार भत्ता दिने, १९ खर्ब डलरको राहत प्याकेज
प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप
दुर्गेश थापा र योगेश काजीको स्वरमा ‘सलाई छ सलाई’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
प्रचण्डसँग वार्ता गरिरहेका दुई मन्त्री – गौरीशंकर चौधरी र मणि थापा ?
संसद विघटनदेखि पुनःस्थापनासम्मको भित्री कथा : ‘सेटिङ’भत्केको कतिबेला थाहा पाए ओलीले ?
यसैसाता आठ करोडको आईपीओ खुल्दै, कति दिन सकिन्छ आवेदन ?
बालुवाटार बोलाएर टोपबहादुरलाई ओलीको चेतावनीः मन्त्रीमा बसिरहन मन छैन ?
मन्त्री क्वार्टरमा बादलको बिलौना – अदालतले बिताउँछ कि क्या हो ?